Shacab iyo Shabaab oo kudagaalamay Shabeellaha Dhexe +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shacab iyo Shabaab oo kudagaalamay Shabeellaha Dhexe +VIDEO
Dagaal u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, dagaalka ayaa si goos goos u socday tan iyo shalay.
Sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa ka dhacay tuulada Masaajidka Cali Gaduud, halkaasoo ay isaga hor-yimaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo maleeshiyooyin deegaanka ah oo is abaabulay.
Maleeshiyada dagaalka la gashay Al-Shabaab oo loo yaqaano Macawiisley ayaa la sheegay inay ka hor-yimaadeen dhibaatooyin ay kala kulmayeen Shabaabka sida xoolo looga qaado Zakawaad iyo in carruurtooda lagu amray inay ku soo wareejiyaan.
Waraarka ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay illaa afar dagaalame ka tirsan Shabaab, halka dhanka Maleeshiyada Macawiisleyda laga dilay mid ka mid ah abaanduulayaashooda oo lagu magacaabayay Hibaad Ali Dasar.
Dadka deegaanka tuulooyin ka tirsan degmada Aadan Yabaal oo is abaabulay ayaa bilaabay inay dagaalo la galaan Al-Shabaab, iyagoo ka codsaday dowladda Federaalka inay ku garab siiso, maadaama dhulkooda iyo deegaankooda lagu soo duulay.